शिक्षा/स्वाथ्य – Sanibar News
एजेन्सी । पाठेघरको ट्युमर भन्नासाथ प्रायः मानिसहरु अत्तालिने गर्छन्, कतै यो क्यान्सर त होइन । खासमा ट्युमर जहाँ पनि हुनसक्छ तर बढीमात्रामा पाठेघरको ट्युमर हुने गरेको छ । खासमा कुनै पनि शरिरमा अन्य मासु पलाउनु अथवा अस्वाभाविकरुपमा मासु बढ्नुलाई ट्युमर भनिन्छ । ट्युमर भन्नेवित्तिकै सबै मानिसको मानसिकतामा आउने कुरा हो, क्यान्सर तर सबै ट्युमर क्यान्सर हुँदैनन् । ट्युमर दुइ किसिमका हुन्छन्, म्यालिगनेन्ट र नन म्यालिगनेन्ट ।
म्यालिगनेन्ट ट्युमर चाहिँ क्यान्सर ट्युमर हो र नन म्यालिग्नेट ट्युमर नन्क्यान्सर ट्युमर हो । धेरैजसो नन क्यान्सरस ट्युमर हुन्छ । अहिले महिलालाई ट्युमर सुन्नेवित्तिकै मलाई क्यान्सर हुन्छ कि भन्ने भय हुन्छ तर डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । सबै ट्युमर क्यान्सर नहुने भएपनि क्यान्सर छ कि छैन भनेर टेस्टहरु भने गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि ओभिरियन्ट ट्युमर हुनसक्छ ।
जुन दुइ थरिको हुन्छ । म्यालिगनेन्ट र नन म्यालिगनेन्ट ओरियन्ट पनि धेरै थरि हुन्छ । बडीको ट्युमर भनेको अर्को फाइब्रोइट हुन्छ । फाइब्रोइट ट्युमर नन म्यालिगनेन्ट हो । पहिलो कुरा सबैले के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने ओभरीको ट्युमर भनेर धेरै कुरा आइरहेको छ । अल्ट्रासाउण्ड गर्दा पानीको फोका छ भने यसमा अन्य टेस्ट आवश्यक हुन्छ ।
– उमेरमा फरक पर्छ , ४० वर्ष काटेको महिलाको ट्युमर सानो भएपनि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
– साइज ६ सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो भयो भने पनि क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ ।
– पानीको फोका सँगै अन्य सोलिड कम्पोनेन्ट पनि छ भने क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ ।
के कारण हुन्छ ट्युमर?
– कम उमेरमा विवाह गर्नु
– धेरै बच्चा जन्मा(उनु
– धुम्रपान तथा मध्यपान गर्नु
– आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समाजमा सम्भावना बढी हुन्छ
– युट्राइग फ्राइबब्राइट भनेको सर्भाइकल ट्युमर हो जुन उल्टो बच्चा पाउने, कम बच्चा पाउने अथवा ढिलो बच्चा पाउने जसमा पनि हुन्छ ।
– ओभेरियन्ट ट्युमर पनि बच्चा कम पाउनेलाई हुने सम्भावना हुन्छ । यो दुवै ट्युमर वंशाणुगत पनि हुन्छ ।
– ओभेरियन्ट ट्युमरको केही लक्षण नै नदेखिन सक्छन् । ठूलो साइजमा पुग्दासमेत पेन पनि नहुने हुन सक्छन् ।
– पाठेघरको ट्युमर क्यान्सर होस् या नन क्यान्सर, कहिले काहीँ धेरै पेट दुख्ने, बटारिने हुनसक्छ ।
– महिनावारीमा धेरै रगत बग्ने, सेतो पानी बग्ने ।
– पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा पनि सेतो पानी धेरै बग्ने गन्हाउने हुनसक्छ ।
– सरसफाई तथा खानेकुरामा ध्यान दिने ।
– पाठेघरको मुखको पानी जाँच्ने अर्थात् प्याब्स मेड टेस्ट समय समयमा गराइरहने ।
– शरिरिक सम्बन्ध भएको ३ वर्षपछि प्याब्स मेड टेस्ट गर्ने ।
– समय समयमा अल्ट्रासाउण्ड गर्ने तथा स्वास्थ्य चेकअप गर्दै गर्ने ।
– विवाहित महिलाले सुइ लगायो, पिल्स खायो भने पनि त्यसले ओभरी र युट्राइङ ट्युमरबाट बचाउँछ । अण्डा बन्न दिँदैन र त्यसले इन्फेक्सन हुन दिँदैन । (एजेन्सीको सहयोगमा )
एजेन्सी । हामी दैनिक विभिन्न समयमा विभिन्न खालका खानेकुराहरु खाइरहेका हुन्छौं । बिहानै उठ्ने बित्तिकै खाजाको रुपमा धेरै प्रकारका खानेकुराहरु खाने गर्छौं तर यसरी खाइएका खानाहरु कतिपय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छन् भने कतिपय अहितकर । हामीले बिहानै खाने कतिपय खानेकुरहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ । त्यसैले बिहानै खाली पेटमा हामीले कस्ता खानेकुरा खान हुदैन भन्ने कुरा राम्ररी जान्नुपर्छ । हामीले खाली पेटमा खान नहुने खानेकुराहरु यस प्रकार छन् ।
१ केरा – केरा दूधसँग खायो भने वजन बढ्छ, तर यो खाली पेटमा खानु फाईदाजनक हुँदैन । किनकी यसबाट शरीरमा म्याग्निसियमको मात्रा दुई गुणा बढ्छ । शरीरमा रहेको क्याल्सियमसँग यसको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ । यसबाट अपच, पेट फुल्ने तथा एसिडको समस्या बढ्छ । त्यसैले केरा खाली पेटमा नखानु नै बेस ।
२ सखरखण्ड – सखरखण्ड खानमा निकै मिठो किन नहोस्, तर यो खाली पेटमा खाँदा कत्ति पनि फाइदा गर्दैन । सखरखण्डमा टेनिन र पेक्टिन पाइन्छ, जसलाई खाली पेटमा खाँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्छ । यसले जलन र पेट फुल्ने समस्या पनि निम्त्याउँछ ।
३ काँचो गोलभेंडा – काँचो टमाटर स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । तर, यसलाई एकबिहानै खाली पेटमा खानबाट बच्नुस् । किनकी यसमा रहेको अम्लले पेटमा रहेको ग्यास्ट्रोइंटस्टाइनल एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ । जसका कारण पेट दुख्ने, फुल्ने तथा छाती पोल्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । खाली पेटमा टमाटर खाँदा पथरीको खतरा पनि दुईगुणा बढ्छ ।
४ सोडा– ज्यादा कार्बोनेटका कारण एसिडको समस्या हुन्छ । खाली पेटमा सोडा खाँदा अम्लसँग मिलेर पेट दुख्ने समस्या बढ्न सक्छ । यसका अलावा छाति र आँतमा पनि जलन हुनसक्छ ।
५ औषधि – केहीलाई छोडेर प्राय औषधि खानापछि नै खाइन्छ । यसको कारण हो, औषधिमा रहेको तत्व शरीरभित्र रहेका तत्त्वहरुसँग सिधै मिलेर रासायनिक प्रतिक्रिया नहोस् । यदि यस्तो भयो भने यसले ठूलै समस्या पनि निम्ताउन सक्छ । त्यसैले तपाईंले कुनै औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने डाक्टरसँग अवश्य सल्लाह लिनुस् ।
६ अल्कोहल – पहिलो कुरा त खाली पेटमा अल्कोहल खाँदा छिट्टैनै नशा लाग्छ । अर्कोतर्फ यसले आँतमा पनि निकै नराम्रो असर पुर्याउँछ । त्यसैले बिहान केही नखाइकन रक्सीसहित अल्कोहलजन्य पदार्थ नखाएकै बेस ।
७ दूध हालेको चिया – बिहान उठेर चिया पिउनु त नेपालीको संस्कारजस्तै नै भइसक्यो । तर, तपाईं एकबिहानै खाली पेटमा दूध हालेको चिया खानुहुन्छ भने होसियार रहनुस् । यसले तपाईंको पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्या बढाउँछ । एकबिहानै चिया पिउनै पर्यो भने पनि दूध नहालेको चिया पिउनु बेस हुन्छ ।
पछिल्लो समय औषधि खाएर गर्भपतन गराउनेहरु बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । कानुनविपरीत जुनसुकै पसलमा बेच्न राखिएको गर्भ तुहाउन प्रयोग गरिने औषधि जथाभाबी खाँदा महिलाहरूको ज्यानै धरापमा परेको छ । औषधिद्वारा गर्भपतन गर्न सरकारले कानुनी मान्यता दिए पनि निगरानी नगर्दा जथाभाबी औषधि खाएर महिला रगताम्मे वा बेहोस भएर अस्पताल आइपुग्ने गरेको स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञहरु बताउछन् ।
बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गर्भपतनका औषधि गर्भको जाँचै नगरी, कहिले, कसरी खाने र खाएपछि के ‘साइड इफेक्ट’ देखिन्छ भन्नेबारे कुनै परामर्श नगरी बेच्ने गरिएको छ । कानुन अनुसार सूचीकृत संस्थाबाट तालिम प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्र त्यस्तो औषधि सेवन गर्नु पर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । कानुनमा ८ सातासम्मको गर्भलाई औषधिद्वारा तुहाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
गर्भपतनको औषधि आफु खुशी किनेर खानाले यदि पाठेघरमा गर्भ नबसी पाठेघरको नलीमा बसेको छ र त्यो समयमा गर्भपतनको औषधि सेवन गरियो भने पाठेघरको नली फुट्ने र रक्त्श्राप भएर महिलाको ज्यानै जान सक्ने भन्दै जांच नगरिकन गर्भपतनको औषधि नखान चिकित्सकको सुझाब छ । चिकित्सकको ‘प्रिस्केप्सन’ बिना गर्भपतनको औषधि दिन मिल्दैन । औषधि पसल सञ्चालनका लागि दिइने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा समेत मेडिकलले चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ बिना यो औषधि बेच्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । कानुनी रूपमा स्पष्ट भए पनि यो औषधिको अवैध कारोबार भएको छ । बजारमा मनोमानी रूपमा बिक्री भइरहेको गर्भपतनको औषधि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट निगरानीसहित निःशुल्क वितरण भइरहेको छ ।
काठमाडौँ । मानिसहरु सोच्ने गर्छन् कि रुनु भनेको दुखी हुनु हो । तर रुँदा पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाहरु पुग्ने गर्छन् । हामीले पहिलेदेखी नै सुन्नेगरेको कुरा हास्दा स्वास्थ्यको लासिग फाइदा पुग्छ । तर हास्दा स्वास्थ्यलाई जति फाइदा पुग्छ त्यति नै फाइदा रुदा पनि पुग्ने गर्दछ ।
१. रुँदा आँखाको दृष्टी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । आँखामा आँसु आउँदा नानी चिसो हुन्छ र आँखा सुख्खा रहनु पाउँदैंन र यसो गर्दा दृष्टी क्षमता बढ्छ ।
३. जब मानिस दुःखका कारण रुन्छ, त्यतिबेला शरीरमा विषाक्त पदार्थ बन्न थाल्छ । यस्ता विषाक्त पदार्थ आँसुमार्फत् बाहिर निस्कन्छन् ।
४. शरीरमा म्याग्नीज बढी हुँदा उल्झन्, थकाई, रिसजस्ता समस्या आउँछन् । रुनाले शरीरमा म्याग्नीजको स्तर कम हुन्छ, जसबाट मूड राम्रो हुन्छ र मानिसले हल्का महसुस गर्छन् ।
५. अत्यन्त तनाव महसुस गरिरहेका बेला रुने हो भने तनाव कम भएको महसुस गर्न सकिन्छ । रुँदा शरीरमा एन्डोर्फिन, ल्युकाइन–एन्काफालिन तथा प्रोल्याक्टिन नामक तत्वको स्तर कम हुन्छ, जसबाट तनाव पनि कम हुन्छ ।
६. समस्या परेको समयमा दिमाग र मुटको लिंबिक प्रणाली सहज हुन्छ जसले आराम प्रदान गर्छ । रुँदा मन सफा हुन्छ ।
७. रोएपछि लगभग ८५ प्रतिशत महिला तथा ७३ प्रतिशत पुरुषको रिस कम हुन्छ ।
काठमाडौं : ग्यास्ट्राइटिसलाई नेपालीको साझा रोग भन्ने गरिन्छ। पेटको ‘ग्यास्ट्रिक म्युकोसा’ भनिने यो रोगले पटेको भित्री तह जल्ने, पोल्ने, खुइलिने समस्या देखाउने भएकाले यसलाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। सामान्यतया समयमा खानेकार नखाने,चिल्लो खानेकुरा खाने तथा बजारिया खाने धेरै खाने गर्नाले ग्षास्ट्रइटिसको समस्याले सताउने चिकित्सकहरू बताउछन्।
वाकवाकी लाग्ने नखाए पनि अघाएजस्तो हुने, पेट पोल्ने, नपच्ने मुटु पोल्ने भोक हराउँने आदि ग्यास्ट्राइटिसका लक्षण लामो समयसम्म देखियो भने ग्यास्ट्राइटिसको सुरुको चरण भन्ने गरिन्छ। लामो समयसम्म यस्ता समस्या देखिँदै गयो भने अल्सर समेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर हाम्रो दैनिक जीवनशैलीलाई बदल्न सकियो भने ग्यास्ट्राइटिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् -पाचन प्रणाली पूर्ण रुपले स्वस्थ नहुँदासम्म दूधजन्य पदार्थबाट टाढा रहनुस्।
-ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्न पेटमा पानीको मात्रा प्रसस्त हुनुपर्छ। जसको लागि हरेक दिन कम्तिमा आठ ठूलो गिलास भरी पानी पिउनुहोस्।
-पेटकको जलन घटाउन हरेक दिन भिटामिन ई को ४०० आइयू मात्रा लिने गर्नु पर्छ।
-यदी तपाइँ ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित हुनुहुन्छ भने दैनिक अदुवाको सेवनले अपाचन, ग्यास घटाउनुको साथै पेटको खुइलिएको भित्रको तह ‘ग्यास्ट्रिक म्युकेसा’ बनाउनपनि मद्दत गर्छ। यसले वाकवाकी घटाउँछ र पाचन प्रक्रिया स्वस्थ राख्छ जसले गर्दा दैनिक थोरै अदुवा खाने गर्नु राम्रो हुन्छ।
-ग्यास्ट्राइटिसबाट टाढा रहन दैनिक नरिवल पानी खानु राम्रो हुन्छ।नरीवलको पानीमा प्रसस्त मात्रामा खनिज पदार्थ र पाचन प्रक्रिया स्वस्थ राख्ने पदार्थ पाइन्छन्। जसले गर्दा हरेक दिन यसको सेवन गर्नाले ग्यास्ट्राइटिस घटाउन मद्दत गर्छ।
-ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्नको लागि काँचो आलु त्यसलाई पिँधी त्यसको रस दिनको तीन पटक आधा कचौरा खाना खानु भन्दा १५ मिनेट अगाडि खाने गर्नाले पनि ग्यास्ट्राइटिसबाट टाढा रहन सकिन्छ।
-यदि ग्यास्ट्राइटिसको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने नियमित फलफूलका जुसले पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी कागतिको रसमा अलिकति नुन मिसाएर पिउनाले प्राकृतिक तरिकाले ग्यास्ट्राइटिस कम हुन्छ।
-मासु, अल्कोहल, सूर्तीजन्य पदार्थ, कफि, चिया, मसालेदार खाना, जङक खाना जस्ता खानेकुराबाट टाढै रहूँ। बिहान बेलुका हिड्ने स्वीमिङ गर्ने जस्ता हल्का शारीरिक कसरतमा ध्यान दिनुहाेस् र मानसिक तनावबाट टाढा रहनुहाेस्।
-एकैचोटी धेरै खाना खानुभन्दा धेरै पटक कम वा थोरै थोरै खाना खानु उत्तम हुन्छ किनभने यसले तपाइँको पेटलाई हल्का बनाउँछ र पाचन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ।
रोल्पा, ६ वैशाख (रासस) ः ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले रोल्पाका चार गरीब विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय भर्ना अभियानअन्तर्गत सदरमुकाम लिवाङमा रहेको बालकल्याण नमूना माविमा कक्षा १ मा कविता शाही, कक्षा २ मा बबिता शाही, कक्षा ३ मा प्रशंसा सेन र कक्षा १० मा छविन्द्र विष्टलाई भर्ना गरेसँगै उहाँले शैक्षिक सहयोगस्वरुप जनही रु १० हजारसमेत हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
भर्ना गरिएका सबै विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाका साथै पितासमेत नभएकाले मन्त्री पुनले शैक्षिक सहयोग गर्नुभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुसूदन पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७४ साल भदौमा सञ्चालित कानून सञ्कायतर्फ एलएलबी दोस्रो वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल बुधबार प्रकाशित गरिएको छ।
उक्त परीक्षाको परीक्षाफल www.tu.ntc.net.np, www.edusanjal.com मा हर्न सकिने र नेपाल टेलिकमको १६०२ डायल गरी २४९४९ मा एसएमएस गरेको पाउने सकिनेछ।
भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले शुक्रवार माध्यमिक तहको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने लिखित परीक्षाको दरखास्त आह्वान गरेको हो । परीक्षाका लागि फागुन २० गतेभित्र दरखास्त बुझाइसक्नु पर्ने तथा दोब्बर दस्तुर तिरेर फागुन २७ गतेसम्म बुझउन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
परीक्षा आगामी चैत २४ गते बिहान ११ बजे हुने आयोगले जनाएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका स्नातक तहवा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र शिक्षक सेवा नियमावली अनुसार अयोग्य नभएका जो कोहीले लाइसेन्स परीक्षामा आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार परीक्षा दस्तुर ७ सय लाग्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापा, काठमाडौं, कास्की, बाँके र कञ्चनपुर दरखास्त दिन सकिने छ । दरखास्त संकलन केन्द्र रहेका जिल्लाहरुमा नै परीक्षा सञ्चालन हुने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
एकसय पूर्णांकको हुने लिखित परीक्षामा पचास अंक ल्याउने उत्तीर्ण हुने साथै, परीक्षाको लागि माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रकै पाठ्यक्रम लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।